Olee otú Igosi Delkin Devices Kaadị ebe nchekwa Data Recovery
Enwere m ike Naghachi Photos si Delkin Devices Kaadị ebe nchekwa?
Usoro Delkin Devices Kaadị ebe nchekwa Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
1 Enwere m ike Naghachi Photos si Delkin Devices Kaadị ebe nchekwa?
M nwere Delkin Devices SDHC kaadị. Ọ na-echekwa ọtụtụ n'ime ezinụlọ m photos. Ụnyaahụ m ụmụaka ehichapụ foto niile na ya mmadụ na mberede. O di nwute na m na-adịghị ihe ọ bụla ndabere. N'ihi ya, m na-dị nnọọ eche na ọ bụrụ na m na-enwe ike ịchọta azụ foto m. Daalụ nke ukwuu.
Delkin Devices bụ a ma ama na igwefoto dijitalụ ngwa mma na ebe nchekwa kaadị emeputa ihe. The elu àgwà nke Delkin Devices kaadị ebe nchekwa na-adọrọ adọrọ ka ọrụ. Otú ọ dị, Delkin Devices kaadị ebe nchekwa data ọnwụ nwere ike ka na-eme. Data na ya nwere ike furu efu n'ihi kaadị formatting, mberede ma ọ bụ kpachaara anya nhichapụ, ma ọ bụ ọbụna kaadị njehie.
Ya mere, olee otú na-agbake data si Delkin Devices kaadị ebe nchekwa? N'ihi na m na, ga-amasị m na-Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị ka a na-agbalị. A pụrụ iche nke usoro ihe omume-enyere gị aka naghachi ehichapụ, formatted, ma ọ bụ ọbụna rụrụ arụ faịlụ site na Delkin Devices kaadị ebe nchekwa effortlessly. Site n'enyemaka nke ya, ị pụrụ mgbake a uka nke faịlụ na ụdị si gị Delkin Devices kaadị ebe nchekwa, dị ka vidiyo, ọdịyo faịlụ, ihe oyiyi, txt faịlụ, akwụkwọ faịlụ na ndị ọzọ.
Ugbu a download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery omume iji weghachite data si Delkin Devices kaadị ebe nchekwa.
Na-akwado data mgbake si ahịhịa, ike mbanye, na kaadị ebe nchekwa, flash mbanye, dijitalụ igwefoto na camcoders
2 Usoro Delkin Devices Kaadị ebe nchekwa Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ndị na-esonụ ndu na-eme na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Mac ọrụ nwere ike rụchaa mgbake na yiri nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite Delkin Devices kaadị ebe nchekwa data mgbake
Wụnye na ẹkedori Wondershare Data Recovery na kọmputa gị, na mgbe ahụ ị ga-esi a mmalite window na 3 mgbake ụdịdị.
Ebe a, na-agbake foto site na Delkin Devices kaadị ebe nchekwa, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode.
Nzọụkwụ 2 iṅomi Delkin Devices kaadị ebe nchekwa
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị Delkin Devices kaadị ebe nchekwa na pịa "Malite" ka usoro ihe omume ịchọpụta ya.
Ọ bụrụ na faịlụ furu n'ihi formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi Data si Delkin Devices kaadị ebe nchekwa
Ị ga-enwe ele hụrụ faịlụ aha mgbe scanning ka ego ma gị furu efu faịlụ nwere ike natara ma ọ bụ. Plus, ị pụrụ ọbụna preview photos.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka akara faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" button na-ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara data na gị Delkin Devices kaadị ebe nchekwa ozugbo ke mgbake.
Olee otú Naghachi Data si Mpụga diski ike chọpụtaghị
Olee otú ndabere iOS 9 na Mac
2 ụzọ naghachi Dropbox ehichapụ faịlụ na Windows & Mac
Top 5 Ngwaọrụ n'ihi Secure Hichapụ na I Kwesịrị Ịmara
Flash ebe nchekwa Data Recovery: Naghachi ehichapụ ma ọ bụ Lost faịlụ site Flash ebe nchekwa
Olee otú Naghachi ehichapụ Pictures site na kọmputa
Mpg File Iweghachite
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Delkin Devices Kaadị ebe nchekwa Data Recovery